ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် ဇာခါ ရပ်ဖို့လဲ? | Great Arakan
Home Blogs ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် ဇာခါ ရပ်ဖို့လဲ?
တကဗာလုံးမှာ မြို့ကြီးတိကို အလားအလာပိတ်၊ တဆီခြောက်ရလောက်အောင် မြို့တိ တိတ်ဆိတ်လားကေလည်း၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုနှုန်းက မကျဆင်းလားရေအပြင်၊ တရိပ်ရိပ် တက်လာနိန်ပါသိမ့်ရေ။ ဇာခါ ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် ကူးစက်စွာ ရပ်ပနာ၊ လူတိ ပုံမှန်ဘဝကို ဇာခါ ပြန်ရပါဖို့လဲ? အဖြေက၊ ကဗာထက်က လူတယောက်လည်း အတိအကျ မပြောနိုင်ဆိုစွာပါ။
တိုင်းပြည်တိမှာ လမ်းအလားအလာတိပိတ်၊ နိုင်ငံတကာ ကူးလူးဆက်ဆံမှုတိပိတ်၊ အိမ်ထဲမှာရာ နိန်ကတ်ဖို့ တားနိန်ကတ်စွာက၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် လုံးဝ ပျောက်လားအောင်လို့ ပိတ်ပင်စွာ မဟုတ်ဘဲ၊ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု ပမာဏကို ရှိရေ ဆေးရုံတိမှာ ကုသနိုင်ရေ ပမာဏအထိ ချော့ချစွာမျိုးရာ ဖြစ်ပါရေ။ (ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် ကူးစက်ခံရရေ လူ ၈၀% က အိမ်မှာ သာမန် ဆီးသောက်၊ အားမွီးနိန်ရုံနန့် ကောင်းလားကေလည်း၊ ကျန် ၂၀% က အရေးပေါ်လူနာအဖြစ် ဆေးရုံတက် ကုသဖို့ လိုပါရေ။ ယင်း ၂၀% အရေးပေါ်လူနာတိကိုက၊ ဆူနာမီ လှိုင်းတိပိုင် တရိပ်ရိပ် ဆေးရုံတိကို ရောက်လာလို့၊ တကဗာလုံးမှာ ဆေးရုံ ကဒင်တိ၊ စက်ကရိယာတိ မလောက်မငှ ဖြစ်လာစွာပါ။)
အောက်ကပုံကို ကြည့်ကေ အစက်စက်နန့် ပြထားရေ ရီပြင်ညီမျဉ်းကို တွိပါလိမ့်မေ။ ယင်းမျဉ်းက ဆေးရုံတိမှာ ကုသနိုင်ရေ ပမာဏ(Healthcare System capacity)ကို ပြထားစွာပါ။ အေဗိုင်းရာ့ဆ်ကို မထိန်းချုပ်(Without measures)ကေ ယင်းရီပြင်ညီမျဉ်းအထက်မှာ အနီရောင် အများကြီး ဖြစ်လားစွာကို တွိပါလိမ့်မေ။ ပြောရဖို့ဆိုကေ ယင်းအနီရောင်ထဲမှာ ရောက်လားရေ လူနာတိက မကုသနိုင်လို့ သီလားရဖို့ လူနာတိပါ။ လူတိကို အပြင်မထွက်ရ၊ ဆိုင်တိ၊ စီးပွားရေးတိကို ပိတ်ပလိုက်ဖို့(With measures)ဆိုကေ၊ ကူးစက်မှုနှုန်းစွာ ရီပြင်ညီမျဉ်း အောက်ကို ရောက်လားနိုင်ပါရေ။
ပြဿနာက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို လုံးဝ ပျောက်ကင်းအောင်လုပ်ဖို့ ကာကွယ်ဆီး ထုတ်ဖော်နိုင်မှ ဖြစ်ပါဖို့။ ယင်းကာကွယ်ဆီးကို ထိုးထားရေ လူက၊ အေဗိုင်းရာ့ဆ်ကို ထိတွိကေလည်း တခုလည်း မဖြစ်နိုင်ပါဗျာလ်။ ယင်းပိုင်ဆီးမျိုးထုတ်ဖို့ အားလုံး အဆင်ပြေချောမွေ့နိန်ကေတောင်၊ အဂုအချိန်ကနိန် နောက်ထပ် ၁၂ လ ကနိန် ၁၈ လ အထိ ကြာနိုင်ရေလို့ ပညာရှင်တိက ခန့်မှန်းထားပါရေ။
ကကောင်းကြီးရေ ပြဿနာက အထက်ကပိုင်၊ ဆိုင်တိ၊ စီးပွားရေးတိ အားလုံးကို ပိတ်ပနာ၊ လူတိကို လမ်းလားခွင့် မပီးဘဲ၊ အိမ်ထဲမှာ ၁၂ လ နိန်ခိုင်းဖို့၊ ကဗာထက်က တခုနိုင်ငံမှာလည်း စီးပွားရေး အင်အား မရှိပါ။ စီးပွားရေးအင်အား အကောင်းဆုံး အမေရီကန်ပြည်ထောင်စု၊ တရုတ်နိုင်ငံရို့လည်း မလုပ်နိုင်ပါ။ ယင်းအတွက်နန့် ရီတိုဗျူဟာတခုကို ဆွဲလာကတ်ပါရေ။ ယင်းချင့်က အထက်မှာ ပြောခရေပိုင် ဆေးရုံတိမှာ ကုသနိုင်ရေ ပမာဏထိ ကူးစက်မှုကို ၁ လလောက် ထိန်းချုပ်လိုက်။ ယင်းပမာဏအောက်ကို ယော့ကျလားကေ၊ လူတိ၊ စီးပွားရေးတိကို ၁ လလောက် တခါ ပြန်ဖွင့်ပီးလိုက်။ ပြန်တက်လာကေ တခါ ၁ လလောက် ပြန်ပိတ်ဆိုရေ ရီတိုဗျူဟာပါ။ လှိုင်းပိုင် တက်လိုက်၊ ကျလိုက် ဖြစ်နိန်ရေ အဝါရောင်မျဉ်းကို အောက်ကပုံမှာ တွိနိုင်ပါရေ။
အေပိုင် လူတိကို လားခွင့်ပီးလိုက်၊ ပြန်ပိတ်လိုက်နန့် ကာကွယ်ဆီးထုတ်နိုင်လို့၊ တိုင်းသူပြည်သား အများအပြား ကာကွယ်ဆီး ထိုးဗြီးရေအချိန်ထိ အချိန်ဆွဲထားဖို့ လိုပါဖို့။ ယင်းအချိန်က ၂ နှစ်လောက် ကြာဖို့လို့ ဗျူဟာဆွဲရေ လူတိက ခန့်မှန်းထားကတ်ပါရေ။
နောက်အစားထိုး နည်းလမ်းတခုက လူတိ နိန်ထိုင်ပုံကို ပြောင်းပနာ၊ အေအတိုင်း ဆက်နိန်ယင်း ကူးစက်မှုကို အနည်းဆုံး ချော့ချကတ်စွာပါ။ အေနည်းလမ်းကိုလည်း တချို့နိုင်ငံတိမှာ ကျင့်သုံးနိန်ပါရေ။ ယကေလည်း အေနည်းလမ်းက လူတိုင်း စည်းကမ်းရှိဖို့လိုပနာ၊ အစိုးရ အထောက်အပံ့ အင်အားလည်း အများကြီး လိုပါရေ။
အကျဉ်းချုပ် ပြောရဖို့ဆိုကေ၊ တကဗာလုံးမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ်ကို အဗြီးသတ် ပျောက်လားအောင် ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် အနည်းဆုံး ၂ နှစ် ကြာနိုင်ရေ ဆိုစွာပါ။ ယင်းအချိန်အတွင်း တကဗာလုံးမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိ ကကောင်းကပြန် ဖြစ်လားပနာ၊ အလုပ်လက်မဲ့တိ သန်းပေါင်းများစွာနန့်၊ နိစဉ် လူနိန်ထိုင်မှုဘဝကအစ အားလုံးပြောင်းလဲလားနိုင်ရေ ဆိုစွာပါ။
အားလုံး ကဗာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ အကြံပီးချက်တိကို တသွေမတိမ်း လိုက်နာပနာ၊ ကျန်းမာအောင်ရာ နိန်ကတ်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါရေ။
Previous articleကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် ၅ သိန်းကျော် ကူးစက်၊ အမေရီကန် ဒုတိယတက်လာ
Next articleကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် ကူးစက်မှု အများဆုံးနိုင်ငံ အမေရီကန်ဖြစ်လာ